Kacaanka Slider WordPress Plugin Review & Sida Loo Hago | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Kacaanka Slider WordPress Plugin Review & Sida Loo Hago
Kacaanka Slider WordPress Plugin Review & Sida Loo Hago
0 Daqiiqado 20 ayaa akhriyay
Kacaanka Slider waa slider heer sare ah oo la heli karo sida plugin WordPress ah iyo kordhinta Magento. Waxa ay sumcad weyn ka heshay bulshada WordPress sababtoo ah sifooyin badan oo kala duwan iyo fudayd isticmaalka.
Dulmarkan waxaan ku dabooli doonaa sifooyinka ugu muhiimsan ee Kacaanka Slider WordPress Plugin, ka dibna waxaan ku tusi doonaa sida ay u fududahay inaad adigu iska dhejiso meel eber ah.
Hel Kacaanka Slider mawduucaaga! Furaha Kacaanka Slider-ka waxaa lagu soo daray lacag la'aan iyadoo la iibsanayo wadarta guud ee mawduuca WordPress sida plugin la duubo. Markaa ma aha oo kaliya inaad hesho plugin cajiib ah waxaad sidoo kale heli doontaa mawduuca wadarta guud iyo sidoo kale bogga WPBakery Builder! (Fadlan eeg qoraallada ku saabsan rakibidda iyo isticmaalka plugins-kaaga xidhmaysan ee hoose).
Hel Kacaanka Slider
Kacaanka Slider: Maxaa ka dhigay Plugin-kan mid aad u Weyn
Waxaa jira astaamo aad u wanagsan oo lagu dhisay Slider Revolution si ay u sahlanaato abuurista sliders-ka caadiga ah ee mareegahaaga. Waa kuwan dhowr ka mid ah kuwa aan ugu jecelnahay.
Qaababka & Waxqabadka
Kacaanka Slider-ka waxa uu bedelay diiradda si uu u noqdo wax ka badan slider. Tan iyo markii la cusbooneysiiyay nooca 6, waxaad dabcan abuuri kartaa sliders firfircoon, iyo sidoo kale carousels iyo muuqaallo (hal sawir oo loo isticmaalo sida safka bog dhisaha). Plugin-ku sidoo kale waa ka jawaab celin diyaar ah oo leh ikhtiyaar dhaxal ah oo cusub. Markaa halkii slide-gaaga uu si fudud ugu yaraan lahaa aaladaha moobilka canaasirta ayaa wax ka beddeli doona ama yaraan doona si slide-kaaga ama modulekaagu uu u noqdo mid la akhriyi karo oo u wanaajiyo hadba aaladda.
Ilaha Nuxurka Badan
Ma doonaysaa in aad u abuurto slider qoraaladaada? Mise alaabtaada WooCommerce? Dhib maaha - ka dooro 9 ilo kala duwan oo nuxur ah marka la abuurayo sliderkaaga.
Ilaa qoritaanka qoraalkan Kacaanka Slider wuxuu taageeraa macluumaadka ku salaysan:
Asal ahaan/caadada: soo geli sawiradaada/fiidiyowgaaga
Posts: ka dooro qoraaladaada baloogga, noocyada boostada gaarka ah, aqoonsiyada boostada ee gaarka ah, ama isticmaal bogga/bogga hadda jira (wax fiican haddii aad rabto inaad ku darto slider muuqaal ah boostada blog ama shayga faylalka)
WooCommercesoo bandhig alaabtaada
warbaahinta bulshada: gaar ahaan Flicker, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube ama Vimeo
Kacaanka Slider wuxuu kuu sahlayaa inaad abuurto sliders caado ah adiga oo ku daraya xulashooyinka wax walba. Dooro daahitaanka slide kaaga, fallaadhaha navigation-ka, xarfaha gaarka ah, ku dar sooyaalka isbar-bar yaacyada, goobta slider (ku dar margins), ku dar lakabyada warbaahinta, geli badhamada, dooro wareejinta slide iyo in ka badan oo dhan adigoo isticmaalaya liiska hoos-u-jiidka ah ee plugin-ka oo dhan.
Waxa intaa dheer in aad wax kasta u habayn kartaa oo xitaa kaydin kartaa presets-kaaga si aad dib ugu isticmaasho qaababka font, kala-guurka slide, animations lakabka iyo aad u fudud.
Ku dar qoraal, xiriirin, sawirro, muuqaalo iyo maqal dhowr dhagsi oo jiirkaaga ah. Tani waxay ku siinaysaa awood aad ku abuurto macluumaad qani ah boggag ay akhristayaashaada iyo macaamiishaadu awoodi doonaan inay ku aqoonsadaan. Waxaa dheer mid kasta oo ka mid ah noocyadan warbaahineed waxaa lagu daraa sida lakab u gaar ah oo leh animations u gaar ah, waqti iyo qaabab aad dejisay adigoo isticmaalaya doorashooyinka sare ee Slider Revolution.
Rakibaadda Kacaanka Slider
Marka hore waxaad u baahan doontaa inaad hesho koobiga Kacaanka Slider WordPress Plugin. Waxaa jira dhowr habab oo kala duwan oo lagu rakibo plugin iyadoo ku xiran haddii aad iibsatay nuqulkaaga plugin ama haddii lagu daro mawduucaaga qaaliga ah.
1. Ku rakib nuqulkaaga Kacaanka Slider
Haddii aad ka soo iibsatay koobigaaga kacaanka Slider ka CodeCanyon waxaad u baahan doontaa inaad laftaadu rakibto plugin-ka. Si aad u soo dejiso feylasha plugin-ka gal akoonkaaga Envato oo aad boggaga wax-soo-dejinta (waxaad ku heli kartaa boggan adiga oo dulmaraya magacaaga isticmaale). Ka dib hel nuqulkaaga Kacaanka Slider oo dooro ikhtiyaarka soo dejinta ee "Faylka WordPress ee la rakiban karo oo keliya."
Marka xigta, gal boggaaga WordPress oo u gudub Plugins > Kudar Cusub.
Kadibna ku dhufo badhanka "Upload Plugin" ee ku yaala dhanka bidix ee sare ee shaashaddaada.
Halkan, isticmaal badhanka "Dooro File" si aad u dooratid feylka plugin ee aad hadda ka soo dejisay CodeCanyon, oo guji "Install Now" badhanka.
Taas ka dib kaliya dhaqaaji plugin-ka oo waxaad diyaar u tahay inaad dhisto sliders!
Fiiro gaar ah: Waxa kale oo aad ku rakibi kartaa plugin-kaaga adigoo isticmaalaya FTP adiga oo galaya server-kaaga oo aad ku dhejinayso fiilada la soo saaray (aan la sii dayn) galkaaga oo ku yaal wp-content/plugins.
2. Ku rakib Kacaanka Slider oo ay ku jiraan Mawduuca Premium
Mawduucyo badan oo qaali ah waxaa ka mid ah koobiyada plugins premium-ka oo leh mawduuca soo dejinta. Haddi sidani tahay sida aad rabto inaad u rakibto nuqulkaaga Kacaanka Slider markaas waxaad u baahan doontaa inaad tixraacdo dukumeentiyada mawduucaaga.
Inta badan kuwa horumariya mawduuca waxay ku dadaalaan sidii ay u fududayn lahaayeen habka rakibaadda xirmaysan ee plugin. Tusaale ahaan, adigoo ku daraya baarka ogeysiiska ama guddi hawlgelinta.
Hagahayaga waxaan ku isticmaaleynaa wadarta mawduuca WordPress. Ka dib marka aad rakibto oo aad shaqeyso Total waa inaad aragto isla markiiba shaashadda oo kugula talinaysa inaad rakibto Kacaanka Slider (iyo plugins kale oo ay ku jirto mawduuca).
Kaliya dhagsii xidhiidhka si aad u aado bogga plugins ee lagu taliyay/la xidhxidhay, dabadeed dhagsii si aad u rakibto oo aad u dhaqaajiso pluginskaaga.
Wadarta guud waxa kale oo ka mid ah ikhtiyaarka gaarka ah ee soo dejinta demo si loo rakibo oo loo dhaqaajiyo Kacaanka Slider marka la soo dejinayo xogta muunada. Haddii Kacaanka Slider loo isticmaalay si loo abuuro demo aad soo dejinayso waa in lagugu dhiirigeliyaa inaad rakibto plugin sida kor lagu arkay.
Markaa hubso in ikhtiyaarka "Import Sliders" la doortay, mawduucuna wuxuu si toos ah uga soo dhoofin doonaa sawir-qaade kasta oo ka mid ah demo. Fudud!
Hagaha Isticmaalaha Kacaanka Slider
Kadib markaad rakibto plugin-ka, waa inay kudartaa shay menu dashboardkaaga ugu muhiimsan ee WordPress. Guji kan si aad u geyso bogga maamulka slider slider Kacaanka.
Halkan waxa aad ka samayn kartaa ama wax ka beddeli kartaa sliders, soo dejinta templates, dhaqaajiso shatiga haddii aad soo iibsatay koobi adiga kuu gaar ah plugin ah.
Dhaqdhaqaaqa shatiga Plugin ee Kacaanka Slider
Haddii aad iibsatay Slider Revolution naftaada waad dhaqaajin kartaa si aad u furto dhammaan astaamaha slider-yada. Si aad u hesho shatigaada waxaad u baahan doontaa inaad ku noqoto CodeCanyon oo aad booqato bogga plugin Slider Revolution.
Halkan guji "Taageerada" tab si aad u aragto dhammaan shatiyada aad iibsatay. Nuquli furaha shatiga oo ku noqo dashboardkaaga WordPress.
Gujinaya astaanta gambaleelka
Kadib geli furaha shatiga Si aad taageero uga hesho qoraaga plugin sidoo kalena aad u furto jaangooyooyinka Module Kacaanka Kacaanka Slider Slider & Addons waxaad u baahan doontaa inaad iibsato shatigaaga.
MUHIIM, Plugin La Xidhay: Haddii koobiga Kacaanka Slider ka lagu daray mawduucaaga waxaad iska indho tiri kartaa qaybtan. Looma baahna in la dhaqaajiyo shatiga plugin maadaama plugins-ku-xidhan aysan mid lahayn. Taa beddelkeeda waxay ku xiran tahay qoraaga mawduucaaga si uu u hubiyo in nuqulkaaga plugin lagu cusboonaysiiyay mawduucaaga cusboonaysiinta. Iyadoo mararka qaarkood tani ay ka dhigan tahay in laga yaabo inaad sugto wax yar cusboonaysiinta slider-ka waxay hubisaa in plugin-ku si buuxda ula jaan qaadayo mawduucaaga.
Kahor intaadan bilaabin dhismaha waxaan kugula talineynaa inaad booqato Goobaha Guud ikhtiyaarka (kaas oo ah shayga liiska hoostiisa ee Kacaanka Slider).
Waxaa jira xulashooyin badan oo muhiim ah halkan oo loogu talagalay habaynta grid ka jawaab celinta caadiga ah (kuwaas oo khuseeya marka la dhisayo sliders cusub), URL-loading font custom, database abuurista plugin iyo in ka badan. Laakiin waxaa jira laba ikhtiyaar oo aan kugula talineyno inaad wax ka beddesho.
Doorashada ugu horreysa ee ay tahay inaad tixgeliso tafatirka waa Ogolaashaha Kaas oo aad isticmaali karto si aad u xaddido gelitaanka plugin ee admins-ka kaliya. Tani waa hab sahlan oo lagu hubinayo adiga, naqshadeeyahaaga shabakada ama maamulayaasha kale inay yihiin kuwa kaliya ee abuuraya sliders ee goobtaada (gaar ahaan waxtar leh haddii aad leedahay qorayaasha martida ee bloggaaga).
Doorashada labaad ee laga yaabo inaad rabto inaad wax ka beddesho waa Dhibcaha Goynta Layout Grid ee Hore doorasho. Kuwani waa ballacyada pixels marka loo eego aaladda habaynta ka jawaab celintaada.
Tani sidoo kale waa meesha aad awood u siin karto xarfaha gaarka ah, raritaanka caajiska ah ee xisbiga 3aad iyo ku qasbida abuurista xogta (haddii aad qabto arrimaha miiska Kacaanka Slider). Marka la sameeyo, hubi inaad kaydiso dejimahaaga.
Hadda waxaad bilaabi kartaa inaad dhisto sliders-yadaada! Waxaad haysataa saddex ikhtiyaar - ka bilow xoq, ka soo jiid faylka dhoofinta bilaashka ah ee Kacaanka Slider "tusaalaha isticmaalka" ama soo dejinta muunadaha muunada ee ku jira mawduucaaga.
Soodejinta gacanta ee Slider
Si aad u soo dejiso slider aad ka soo dejisay degel kale tusaalooyinka isticmaalka Slider Revolution marka hore kala soo bixi faylka slider-ka boggooda, ka dibna dib ugu noqo WordPress kaaga dhagsii Soo dejinta Slider doorasho. Halkan ka baadho muunada faylka aad soo dejisay oo guji Upload. Tani waa inay ku darto slider-ka muunada iyo dhammaan goobaheeda si aad u isticmaali karto saldhig ahaan slider cusub.
Module cusub oo ka yimid Template
Haddii aad soo iibsatay shatiga Slider Revolution, waxaad heli doontaa dhammaan qaab-dhismeedkooda horay loo sameeyay (waxaa jira in ka badan 180+ oo laga dooran karo). Si aad u isticmaashid template kaliya ku dul bood kan aad jeceshahay, dhagsii summada Isha si aad u aragto ama calaamada Plus si aad u rakibto templateka.
note: Haddii nuqulka Kacaanka Slider-kaagu lagu daray mawduucaaga ma heli doontid hab-raacyadan. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo ka mid ah qoraayaasha mawduucyada waxaa ku jira qaab-hoosaadyada sawir-qaadayaasha kuwaas oo ay u sameeyeen si ay ula socdaan mawduucooda bandhigyada oo aad gacanta ku soo dejisan karto.
Samee Slider Cusub
Haddii aad xoqid ka samaynayso xoq, dhagsii Module cusub oo maran doorasho. Hadda aynu shaqada gaadhno!
Marka hore waxaad arki doontaa fariin soo dhawayn leh oo leh ikhtiyaar aad ku isticmaali karto hagaha bilawga degdega ah. Guji si aad u bilowdo oo aad ula socoto socodkeena hoose.
Dooro nooca slider-ka waxaad haysataa ikhtiyaarka aad ku dooranayso moduleka:
Slider: sida saxda ah waxay u egtahay, sawiro badan oo firfircoon kuwaaso u rogmado si ay u muujiyaan hal slide ka dib kan kale
Muuqaal: hal slide ah oo loo isticmaali karo moduleka nuxurka ah (sida safka marka la isticmaalayo bog dhisaha)
WAYDAARKASawirro badan oo isku mar la arki karo
Kadib dooro qaabaynta:
auto: kani waa goobta caadiga ah kaas oo ku fidin doona slide-gaaga ilaa ballaca weelka ugu weyn sida lagu qeexay mawduucaaga WordPress, laakiin waxaad weli qeexi doontaa dhererka.
Ballaadhan oo ballaadh ah: sida saxda ah waxay u egtahay - ikhtiyaarka slider ballac buuxa oo si buuxda u fidsan doona bidix ilaa midig. Waxaad weli u baahan doontaa inaad qeexdo dhererka sliderkaaga.
Shaashad buuxdaIsticmaal tan si aad u abuurto sliders waaweyn kuwaas oo macno ahaan buuxinaya shaashadda oo dhan, iyada oo aan loo eegin cabbirka biraawsarkaaga ama aaladdaada (xitaa waxaad isticmaali kartaa ikhtiyaarkan si aad ugu darto sliders shaashadda oo dhan fiidiyowyo xitaa saameyn dheeraad ah).
Talaabadii u dambaysayna waxaad u baahan doontaa inaad doorato oo aad habayso ka jawaab celintaada ama dejinta “cabbir”
Wax ka beddelka caadiga ah (tooska ah).Ka dib marka la habeeyo cabbirka shaashaddaada ugu weyn slider-kaaga ayaa isku cadaadi doona si waafaqsan (sidaa darteed slider 1000x400px wuxuu ku cadaadi doonaa slider 500x200px oo leh xarfaha, sawirada iyo walxaha kale ee slider-ka oo si siman u yaraanaya).
Dhaxal caqli leh: afar cabbir oo qalab ah ayaa si toos ah loo abuuray iyadoo lagu saleynayo goobaha desktop-ka ee aad doorato, iyadoo ikhtiyaarka ah inaad wax ka beddesho hadba sida loogu baahdo.
Caado (manual): Waxay kuu ogolaanaysaa inaad dejiso cabbirka slider-gaaga adoo isticmaalaya pixels saxda ah, oo leh ikhtiyaaro dheeraad ah si aad u dejiso cabbirka slider-yada ballaca shaashadda ee kala duwan (miiska, laptop, tablet iyo phone).
Kadib markaad doorato habayntaada slider-yada ugu muhiimsan waxaa lagu geyn doonaa dhisaha Kacaanka Slider. Tani waa meesha aad ka abuuri doonto dhammaan sawiradaada.
Kacaanka Slider Ikhtiyaarada Guud
Kahor intaadan dhisin, waa inaad daryeeshaa qaar ka mid ah aasaaska. Dhinaca midigta waxa ku yaal dhammaan goobaha sliderkaaga. Laga bilaabo Gear icon for General Settings, halkan waa fiirin degdeg ah waxa aad ka heli doonto.
Title: U bixi slide-gaaga magac. Dabcan, waxaad ka tagi kartaa asalka Bilaashka 1 magac iyo magac laakiin waxaanu ku talinaynaa in tan loo bedelo heshiis magac bixineed oo gaar ah iyadoo loo eegayo ujeedada slider-ka. U dooro sliderkaaga magac kaa caawin doona inaad xasuusato waxa ku jira ama bogga aad ku isticmaalayso. Tusaale ahaan guriga haddii aad isticmaalayso slider-ka boggaga guriga. Tani sidoo kale waa halka aad ka heli doonto summada gaaban ee fudud ee sliderkaaga si aad u geliso qoraallada iyo boggaga.
LayoutDooro nooca slider-kaaga (slider, scene ama carousel) iyo cabbiridda (oto, balac buuxa ama shaashad buuxda). Haddii aad isticmaashey hagaha bilowga degdega ah waxaad horey u dooratay kan. Si kastaba ha ahaatee, tani waa sidoo kale meesha aad ka beddeli karto ballaadhka iyo dhererka aagga lakabkaaga (halkaas oo aad ku dari doonto walxaha slider), booska moduleka (xaruntu waa default), midabka asalka ah ama sawirka slide-gaaga (xusuusin - kani waa ka duwan yahay asalka slide ee shaqsiga ah), xadka caadada ah, hooska hoos u dhaca iyo sacab muggiis oo xulashooyin horumarsan ah (dhererka ugu badan ee duubka, qulqulka, aragtida lakabka, iwm).
Content: Dooro sida aad u jeclaan lahayd inaad nuxur ugu darto sliderkaaga. Waxaa jira 9 ilo oo nuxur ah oo laga dooran karo, laakiin inta badan waxaad u baahan doontaa inaad doorato kuwa Custom ikhtiyaarka ah inaad dhisto slide-gaaga laftaadu (in kasta oo ku-salaysan-ku-salaysan iyo xulashooyinka WooCommerce ay sidoo kale aad u anfacayaan).
Cilladaha: Xulashada ugu muhiimsan ee qaybtan waa muddada Islaaydhka caadiga ah - taas oo ah inta uu le'eg yahay inta sawir kasta uu si default ah u socon doono (xusuus - waxaad ku habayn kartaa kan salbadhkiiba mar dambe, laakiin way fiican tahay inaad haysato default). Waxa kale oo aad dejin kartaa dib u dhigista bilawga ah, kaas oo ka dhigi doona slider-kaaga in uu sugo wakhti go'an ka hor inta aanu firfircoonayn. Waxaa jira cillado kale oo loogu talagalay aqoonsiga moduleka gaarka ah, fasallo, iyo ka jawaab celin iyo in ka badan laakiin isticmaalayaasha badankood uma baahna inay beddelaan kuwan.
GeneralQaar ka mid ah xulashooyinka laga yaabo inaad rabto inaad ku isticmaasho qaybtan waxaa ka mid ah jaangooyooyinka slideshow-ka ee is-beddelka, joogsiga dul-wareejinta, slide-yada, iyo doorashada slide-ka hore ee loo qoondeeyay (haddii uu ka duwan yahay bogga aad ku dartay marka hore marka aad dhisayso slider-kaaga). Tani sidoo kale waa halka aad ka heli doonto xulashooyinka aad ku qarin karto ama aad gabyi karto slide-gaaga mobilka ama ballaca pixel-ka hoostiisa.
Dulucda: Kacaanka Slider waxaa ka mid ah tiro saameyno hor leh oo duuban sida parallax, moolka 3D, waqtiga, libdhida, blur, cabirka cawl iyo in ka badan. Dhammaan oo leh jaangooyo la beddeli karo oo loogu talagalay xawaaraha rog-rogid, leexin / leexin, iwm. Ma doonayno inaan qodno kuwan sababtoo ah waxay qaadan karaan waqti aad u sarreeya si aad u barato, laakiin haddii aad soo iibsatay liisankaaga slider-ka waxaan kugula talineynaa inaad la ciyaarto qaar. ee ikhtiyaarada diyaarka ah ee laga sameeyay maktabadda qaab-dhismeedka si aad u barato sida saamaynta duuban ee kala duwan ay u dhaqmaan.
Spinner: Kani waa horudhaciyahaagii - si ay sawiradaadu iyo animationsadu ugu soo shubanayaan server-kaaga, booqdayaasha boggaga waxay arki doonaan asalka slider-ka ee aad dooratay oo ay la socdaan spinner-ka aad dooratay. Waxaa hadda jira 15 spinners oo gaar ah oo laga dooran karo dhammaan kuwaas oo leh midabyo la beddeli karo.
AdvancedHaddii aad rabto inaad awood u yeelatid loading caajis ah waxaad sidaas ka samayn kartaa halkan iyo sidoo kale dooro sawirka dib u dhaca ama fududee slider kaaga daalacashada hore (gaar ahaan iOS4 iyo IE8).
CSS/jQuery: Waxaad ku dari kartaa koodka gaarka ah ee sliders-ka, laakiin tijaabi sida tani tahay waxaan kugula talineynaa inaad ka tagto doorashadan keligaa ilaa aad ku qanacsan tahay codeynta luqadaha.
Sida ModalHaddii aad samaynayso slider aad rabto in aad u muuqato sida popup ama lightbox halkan waa halka aad ka heli doonto fursadaha booska slider, haddii aad jeclaan lahayd inaad isticmaasho midabka daboolka, iyo koodka gaaban si aad u isticmaasho markaad gelinayso modal slider kaaga boggaga (xusuus - tani way ka duwan tahay koodka gaaban ee slider-ka marka uu ku daro sifada isticmaalka).
maqaarkaDoorka maqaarku asal ahaan waa qaab-u-habayn oo aad samayn karto ka dibna ku meelayn karto lakabyada qoraalka markaad dhisayso bogag. Tani waa qalab aad u fiican haddii aad rabto in aad calaamadayntaada ku sii hayso lakabyada isku mid ah.
AddonsQaybtani waxay kuu ogolaanaysaa inaad awood u yeelatid oo aad geliso addons (xusuusnow - addons waxa la heli karaa oo kaliya haddii aad iibsatay shatiga slider-kaaga, kuma jiraan noocyada Kacaanka Slider oo ku lifaaqan mawduucyo).
Xulashada Kacaanka Kacaanka Slider
Marka xigta waa in la go'aamiyo waxaad jeceshahay inaad u isticmaasho navigation ee hoos yimaada rada icon. Waxaa jira fursado badan oo aad u isticmaali karto slider-kaaga. Dhammaan xulashooyinka hoose waxaa ka mid ah si sahlan loo habeyn karo jaangooyooyin loogu talagalay booska / toosinta, cabbirka, muuqaalka iyo qaabaynta/habaynta caalamiga ah.
HorumarkaKu dar bar ama goobaabin horusocod ah oo sawiraysa horumarka slider hadda socda
FallaaroKu dar fallaaro si ay ugu fududaato soo-booqdayaasha inay gujiyaan sawiradaada adiga oo dooranaya 13 nooc oo kala duwan (xusuus - caadada waxay ku saleysan tahay mawduucaaga).
rasaasta: Si aad ugu darto dhibco navigation boggaaga waxaad awood u yeelataa rasaasta, oo ka dooro 14 nooc.
ILAALI: Haddii aad abuurayso slider-ka kooban ee ku salaysan qoraaladaada blog waxa laga yaabaa inaad rabto inaad eegto tabs navigation-ka. Tani waxay soo bandhigaysaa thumbnail, cinwaan iyo wax kasta oo cabirro ah (sida lagu qeexay Hoos Ikhtiyaarada Slide) - aad ula mid ah widget-kii dhawaa ee la soo dhejiyay tusaale ahaan.
Suulka: Si aad u muujiso sawirka thumbnail sida ikhtiyaarka hagidda dooro suulka oo ka dooro 5 qaab.
Cabbirkii hore: Qeex xajmiga sawiradaada horudhaca ah ee loo isticmaalo hagidda.
taabta: Karti oo habbee socodka taabo-ku-tuurka, oo ay ku jiraan ikhtiyaarka xannibaadda duubista, xawaaraha iyo jihada.
keyboardDaar u geli socodka kiiboodhka (waxaa lagu talinayaa in la galo).
mouse: Tafatir mouse-ka la xakameeyey si aad u isticmaasho shaqada carousel ama dib u rogid.
Tafatiraha NavQaybtan waxaa loogu talagalay in lagu habeeyo fallaadhaha, rasaasta, tabsyada ama suulalka oo leh koodka caadada kuu gaar ah. Sidii hore loo soo sheegay, ilaa aad ku qanacsan tahay kood samaynta mooyaane waxaanu kugula talinaynaa inaad isticmaasho slider-ka ee ku dhex dhisan xulashooyinka.
Ikhtiyaarada Islaaydhka Kacaanka
Iyo ugu dambeyntii, Ikhtiyaaradaada Slide.
Background: U dooro asalka boggaaga. Ka dooro hufan, midab leh (waxaad ku dari kartaa gradient), sawir, muuqaal dibadda ah, ama muuqaal (YouTube, Video ama HTML5).
thumbnailQeex thumbnail-ka uu arki karo maamulka iyo thumbnail-ka loo isticmaalo hagidda
animation: Dooro animation-ka wareejinta ee sawiradaada.
shaandheeyeyaashu: Waxaad ku dari kartaa filtarradaada. Aragtidayda kuwani waxay macno badan u samaynayaan bogag sawir leh laakiin adiga ayay kugu xidhan tahay. Hadda waxa jira 22 presets oo laga dooran karo.
Horumarka: Waxaad ku habayn kartaa dhererka duleelka (waqtiga ms), joogsiga iyo muuqaalka muuqaalka bogga si slide ah.
Xeerarka daabac: Qeex haddii boggaga la daabacay ama aan la daabicin. Tani aad ayey u fiican tahay haddii aad ka shaqaynayso boggag xilliyeed ama waqti xaddidan oo aad rabto inaad si tartiib ah u dhisto, daabacdo, oo hadhow uga saarto.
Tags & Linkiga: Qaybtan waxaad ku dari kartaa fasalka gaarka ah, aqoonsiga iyo xogta HTML ee boggaaga sidoo kale waxaad awood u siin kartaa xiriiriye (haddii aad rabto inaad ku darto xiriiriye boggaaga oo dhan).
HalbeegyadaKu dar ilaa 10 cabbir oo gaar ah si aad ugu isticmaasho boggaaga iyo hagiddaada.
Lakabyada Loop: Abuur oo habee goobaha loop-ka slide-yada haddii sliderkaaga uu leeyahay hal slide (gaar ahaan waxtar haddii aad u isticmaalayso slider-kaaga sida sariir soo dhaweyn ah ama qaybta bogga).
Dulucda: Waxa kale oo aad habayn kartaa is-barbar-dhiggaaga iyo saamaynta-rogid (fade, blur ama grayscale) slide kasta.
Sida Loo Sameeyo Slider Kacaanka Slider
Hadda oo aad aragtay sifooyinka (wow waxaa jira wax badan!) Waxaan ku siin doonaa si kooban oo kooban oo ku saabsan waxa aan u maleyneyno inay yihiin fursadaha ugu muhiimsan. Gaar ahaan isagoo ku tusaya sida loo dhiso slider fudud.
Marka hore waxaanu dooranay dhawr doorasho oo guud:
Ku dar cinwaan caadadii iyo magacyo ku jira Title qaybta
Habbee lakabka miiska miiska dhererka iyo ballaca hoostiisa Layout (waxaanu kaaga dhignay 1000px balac si aanu u dhigno ballaca goobta iyo dhererka 500px)
Dooro muddada slide-ga caadiga ah (waxaan isticmaalnay 5000ms taas oo ah 5 ilbiriqsi) hoosta Cilladaha
Dooro a Spinner si aad ugu isticmaasho rakibahaaga hore (waxaanu qayb ka nahay doorashada 7)
Kadib, waxaanu dooranaa Xulashooyinkayada Hagaha. Tusaalahayaga waxaan dooranay qaabka "Uranus" kaas oo ah fallaadho fudud.
Ku darida slides
Taasi waa waxa kaliya ee aan rabnay in aan u dejino slider-kayaga, markaa tallaabada xigta waa in aan ku darno sawirro dhowr ah. Markaad samaynayso slider cusub waxaad horay ugu dul socotaa slide #1 si caadi ah si aad isla markaaba u bilaabi karto ku darista dejinta iyo lakabyada.
Waxaad ku dari kartaa midabka asalka ah, sawir ama muuqaal. Haddii aad doorato inaad ku darto midab waxaad sidoo kale ku dari kartaa gradient.
Fiidiyowga waxaad si fudud ugu dari doontaa isha oo samee dhowr xulasho. Shaashada sare waxaan dejinay duleelka si uu u qasbo Qaabka Daboolida (sidaa darteed muqaalku waxa uu buuxiyaa slider oo dhan) iyo in uu dib u soo celiyo bilawga (sidaas darteed waxa uu u ciyaaraa bilawga mar kasta oo sawirku bilaabmo).
Tusaalahayaga waxaan ku darnay an image ka Maktabadda Warbaahinta. Sawirka waxaanu kaga tagnay qaabka daboolka caadiga ah (kaaso u kala fidiya sawirka si uu u daboolo duleelka buuxa, oo ka soo horjeeda Contain ka soo koobaysa sawirka si uu ugu habboonaado caqabadahaaga slider).
Hadda in lagu daro lakabyo! Xagga sare ee shaashadda waxaad ku arki doontaa ikhtiyaarka ah "+ Add Layer." Tani waa halka aad ka heli doonto fursado badan oo aad ku dari karto sawiradaada. Waxaad ka dooran kartaa 8 kala duwan Ku dar Lakab ikhtiyaarrada:
Text lakabyada ayaa ku fiican in lagu daro cinwaano, sharaxaad ama xitaa xiriiriye fudud. Ku dar wax kasta oo aad rabto inaad ku tiraahdo boggaaga.
sawirka aad bay ugu fiican yihiin gelinta summadaada, ku darista qoto dheer ee bogagga isbarbardhigga, gelista ka hor/ka dib, iyo wax ka badan.
Button fursadaha lakabka waxaa ka mid ah tan oo cabbir ah iyo combos radius xudduudaha kuwaas oo aad wax ka beddeli karto midabka, asalka, midabka xudduudaha, font, gobolka iyo qoraalka. Waxa intaa dheer in ay jiraan tiro ka mid ah diyaarinta hore ee waxtarka leh ee isku xidhka bulsheed ee jiirka duuban ee jiirka, menu hamburger ama xataa ciyaar/hakin.
qaabab waxa loo isticmaali karaa in lagu daro saamaynta (sida garaacista ama iftiiminta midabka gadaasha badhan), si loo qeexo qayb ka mid ah lakabka qoraalka (isticmaal qaab si aad u muujiso kaliya hal kalmad ama weedh) ama in lagu daro xiisaha muuqaalka. Dooro asalkaaga, midabka xuduudka/ cabbirka, xadhkaha u qaabeeya (0 ee labajibbaaran, 100 goobaabin), cabbirka qaabka pixels iyo suufka.
Maqal iyo Video Lakabyadu waa hore toosan yihiin. Dooro warbaahinta aad jeceshahay inaad geliso oo ka dooro fayl maktabadaada warbaahinta ama geli xiriiriye (YouTube, Vimeo, SoundCloud, iwm.). Dabadeed ku dar jaangooyooyinka si aad awood ugu yeelatid looping, autoplay, slide on dhamaadka, mugga saldhiga, qaybta bilawga/dhamaadka iyo horudhaca. Tani waa hab sahlan oo lagu daro marag-kaca dhabta ah slider-kaaga, muuqaal hordhac ah ama casharro.
Astaanta / SVG waa sida saxda ah ee ay u dhawaaqaan - ku dar calaamadaha ama ku dar sawirada SVG ee caadiga ah kuwaas oo si qurux badan u cabbiraya slide kaaga oo dhan.
Saf waa la gelin karaa oo waa sida bog dhise kasta oo kale, oo ay ku dhammaystiran yihiin dejinta tiirarka. Tani waa hab fiican oo lagu abaabulo walxaha lakabka ah ama in la dhiso hal module oo slide ah.
Group waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro koox lakabyo ah si ay u sahlanaato in la dhigo oo la dhaqaajiyo lakabyada la xidhiidha.
Maktabadda lakabka kaliya ayaa la heli karaa haddii aad leedahay shatiga Slider Revolution oo waa ururinta agabyada diyaarsan ee ThemePunch.
Soo dejinta si aad u koobiyayso lakab ama aad uga soo jiiddo slider kale oo maktabadaada yaal. Degdeg ah oo fudud!
Marka hore aan ku darno mid fudud Text lakabka. Waxaad yeelan doontaa ikhtiyaarka ah inaad ku darto cinwaanka Quick Style ama nuxurka - labaduba waa lakabyo qoraal ah, farqiga kaliya ayaa ah xulashooyinka horay loo qaabeeyey ee aad ku arki doonto dhinaca midigta. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah qaababkan ama guji X ee geeska midig ee sare si aad u tagto goobaha lakabka.
Tusaale ahaan, kuwani waa xulashooyinka aanu u dooranay ciwaanka iyo sidoo kale ciwaan hoosaadka boggayaga:
Waxaan ku daray qoraalkayaga Content qaybta, iyo sidoo kale udub dhexaad u ah qoraalkayaga
la doortay a style cabbirka farta, miisaanka, dhererka xarriiqa iyo farta Google
Waxaan habeynay Cabbirka & Booska si aad u bedesho meesha lakabka ku jira weelkayaga slider (xusuusnow - weelkayagu waa 1000 x 500 px)
Ugu dambeyntiina wuxuu ku daray animation saamaynta iyo xawaaraha qoraalkayagu si uu u libdho 800ms (IN : Anim To) iyo isla animations qoraalkayaga si aanu uga baxno (OUT : Anim To).
Waxaan sidoo kale ku darnay badhan. Si aad sidaas u samayso, dul heehaab xidhiidhka "+ Add Layer" oo guji badhanka ikhtiyaarka ah.
Sida qoraalka oo kale, waxaa jira Hababka Degdega ah oo aad isticmaali karto si aad u bilowdo.
Badhankayaga, waxaanu isticmaalnay kuwan soo socda. Mar labaad, aad ula mid ah xulashooyinka qoraalka (laakiin leh dhowr farqi oo muhiim ah):
Waayo, Content Waxaan ku darnay qoraalka badhankayaga.
Laga soo bilaabo style qaybta waxaad ku dari kartaa midabada qoraalkaaga iyo badhanka, xulashada xarfaha oo waxaad ku dari kartaa boos badhankaaga oo leh suuf (gudahood) ama margin (dibadda). Badhankayagu waxa uu isticmaalaa suufka bidix iyo midig si uu u sii ballaadhiyo.
Waxaan mar kale isticmaalnay Cabbirka & Booska fursadaha lagu dhex dhexaadiyo lakabka badhanka ee duleelka.
Oo ku daray animation si uu badhanku u galo ugana baxo duleelka.
Maadaama ay tani tahay lakabka badhanka waxaan sidoo kale ku darnay a dulsaar saamayn sidaa darteed booqdayaashu waxay si dhab ah u ogaadaan inuu jiro xidhiidh. Markaa waxaanu dooranay animation oo aanu badhankayaga ka dhignay wax yar oo hufan oo dul hoganaya.
Badhan, ama lakab kasta oo aad rabto inaad ku darto xidhiidhiye, waa inaad ku dartaa Action. Tusaale ahaan waxaan ku soo darnay Xiriir fudud sidoo kale waxaan qeexnay dejinta (ku dhufo URL-ka iyo bartilmaameedka in daaqad cusub laga furo). Laakiin waxaa jira tiro badan oo ikhtiyaari ah oo aan ahayn isku xirka fudud, sida u rog aqoonsiga (rogid maxalli ah), u bood si aad u booddo (si aad uga gudubto sawiradaada), ciyaarta slide (tusaale haddii aad ku dartay muuqaal is dhexgal ah), fur. qaabka slider-ka, ciyaarta warbaahinta (fiidiyow ku fiican), iwm.
Taasi waa boggayagii ugu horreeyay ee la sameeyay! Hadda aan ku darno ilbidhiqsi si aan kuu tuso dhowr astaamood oo kale.
Haddii aad dul heehaabto xulashada "Slides" waxaad arki doontaa hoos u dhac:
Kudar Islaaydh: Guji si aad ugu darto sawir cusub oo maran, slide bulk si aad ugu darto sawiro badan oo isku asal ah, ama soo dejiso sawir.
Lakabyada Caalamiga ah: Kuwan waxa loo arki doonaa inay yihiin dul-saar dusha sare ee boggag kasta oo aad samayso. Waa hab fiican oo lagu daro summada ama calaamad-biyoodka, oo ay ku jiraan badhanka "Buy Now" ee alaabtaada ama xitaa xiriiriyaha aad iska diiwaan geliso warsidahaaga.
Dhammaan boggaga hadda jira (boodhkayagii dhammeeyey waa #1 Islaaydh Cusub).
Hadda kaliya ku celi nidaamkaaga dhisidda slide inta jeer ee aad rabto!
Waxaa jira doorashooyin badan oo badan oo ku dhex jira Kacaanka Slider-ka oo aad isticmaali karto si aad u sii habayso lakabyadaada. Tusaale ahaan, waxaad ku dari kartaa loop lakabkaaga (waxaad u isticmaali kartaa tan si aad u abuurto qoraal "iib ah" oo ifaya), ku dar saamaynta duubka, wax ka beddel muuqaalka si aad ugu qariso aaladaha yaryar, iyo in ka badan. Waxaan kugula talineynaa inaad hubiso saldhigga aqoonta Kacaanka Slider-ka rasmiga ah si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sifooyinka la heli karo.
Ugu dambeyntiina waxaan rabaa inaan tilmaamo dhowr xiriiriye oo kale oo waxtar leh xagga sare iyo hoose ee wax-dhisaha. Laga bilaabo xagga sare, waxaad ka heli doontaa xiriirada degdega ah ee soo socda (sida ay u kala horreeyaan):
Back: si aad ugu noqoto bogga ugu muhiimsan ee Kacaanka Slider ee ku jira dashboardkaaga WordPress
Slides: si aad ugu darto oo aad u maamusho slidesyada gudaha sliderkaaga
Ku dar Lakab: si aad lakabyo cusub ugu darto boggaaga hadda
The magaca lakabka aad dooratay
Nuqul ah summada si aad u nuqul ka sameyso ama u koobiyeeyso lakabkaaga hadda
Qashinka summada si aad u tirtirto lakabka aad hadda dooratay
Quful summada si aad u quful lakabkaaga si aad uga hortagto wax ka beddelka shilalka
Eye summada si loo muujiyo ama loo qariyo lakabyada
Sare & Hoos Fallaaro si ay ugu dhex maraan lakabyada dhexdooda
Waxoogaa kuu keena Kursi si loo doorto lakabyo
A Rewind summada si aad dib ugu noqotid oo aad dib ugu eegto liiska isbeddelladii dhawaa
The Computer summada si aad dib ugu eegto jawaabta slider-gaaga ee cabbirrada aaladaha caadiga ah
Su'aal calaamadee xiriiriyaha caawinta icon
Ugu dambayntiina a Dhibco summada si aad u gasho qaab-dhismeed degdeg ah lakabkaaga
Iyo hoos-u-fiirinta slider-gaaga waa inaad aragto jadwal. Laga soo bilaabo halkan waxaad wax ka beddeli kartaa dib u dhigista marka lakabyadaadu ay ku noolan doonaan boggaaga (for ours the end time is 00:05:00 ama 5 seconds - kaliya guji si aad wax uga beddesho slide kaaga). Waxa kale oo aad arki kartaa jadwal muuqaal ah oo muujinaya wakhtiga lakabka marka la barbardhigo dhererka wakhtiga guud ee bogga. Qaybaha la xannibay waa wakhtiyada animation lakabkaaga oo aad awooddo si fudud guji oo jiid si aad u bedesho.
Markaad ku darto lakabyo badan waxaad sidoo kale isticmaali kartaa qaybtan si aad dib ugu habayso lakabyadaada adigoo jiidaya oo u daadinaya lakabyada si hagaagsan. Marka lagu daro dhinaca bidix ee sare waxaad ka heli kartaa xiriiriye faa'iido leh si aad u ciyaarto boggaaga si aad u aragto waqtigaaga markaad wax ka beddesho.
Dib-u-eegis & Badbaadi Sliverkaaga
Markaad shaqaynayso waxaad dib u eegi kartaa sliderkaaga adigoo gujinaya buluugga Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh badhanka geeska midig ee hoose.
Ha iloobin inaad Save sawiradaada markaad shaqaynayso! Hubi inaad kaydiso boggaaga ka dib markaad wax isbedel ah samayso. Haddii aad ka guurto duleelkaaga (xitaa haddii ay tahay slide kale) waxaa laga yaabaa inaad lumiso dhammaan shaqadaada adag. Markaa iska hubi inaad badbaadiso, badbaadiso, badbaadiso!
Kacaanka Slider wuxuu kaloo bixiyaa ikhtiyaar Kor u qaad Cabbirrada Faylka markaad kaydinayso taas oo bixisa cadaadis dhinaca server-ka ah iyo talooyinka hagaajinta.
Ka dib markaad wax kaydsato, waad sii socon kartaa oo aad ku shaqayn kartaa sawir-qaadayaal kale, ama waxaad isticmaali kartaa alaabtaada dhammaatay ee bogga.
Si aad ugu darto slide kaaga cajiibka ah qoraal kasta ama bog kasta isticmaal summada gaaban ee Kacaanka Slider oo aad hore u abuurtay. Summadan gaaban waxaa laga heli karaa adigoo gujinaya shayga Kacaanka Kacaanka ee Slider ee ku yaal dashboardkaaga.
Koodhka gaaban waa inuu u ekaadaa [rev_slider alias="ciwaan"][/rev_slider] oo leh "ciwaanka" oo ku salaysan magaca aad siisay slider-ka markii ugu horeysay ee aad abuurtay.
Kaliya ku dheji summada gaaban boostadaada ama boggaga waxa ku jira. Ama haddii mawduucaagu uu taageero goobo dheeraad ah oo slider ah, waxaad sidoo kale ku dari kartaa koodka gaaban.
Haddii mawduucaagu isticmaalo bogga WPBakery dhisaha (tusaale ahaan, sida Total Multipurpose WordPress Theme) markaa waxaad isticmaali kartaa qaybta wax-dhisaha bogga Kacaanka Slider ee ku jira.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku darto moduleka, ka dooro slider shabkada (waxay tusi doontaa liiska dhammaan sliders-yada aad horey u abuurtay), geliso kadibna jiid oo ku rid slider meesha. Sahal sax?
Fikirka ugu dambeeya ee Kacaanka Slider
Waxaan aaminsanahay in Slider Revolution uu yahay mid ka mid ah plugins slider-yada ugu fudud ee la isticmaalo, gaar ahaan maadaama ay bixiyaan tafatire muuqaal ah oo sahlan oo la adeegsan karo iyo tiro badan oo astaamo lagu dhex dhisay si aadan u baahneyn inaad ogaato CSS si aad u qaabeyso sawiradaada (badhamada, xarfaha, midabada iyo in ka badan ayaa horay u jiray!). Waxay helaysaa 5 xiddigood oo adag oo ra'yigeenna waxaad noqon doontaa mid adag si aad u hesho plugin fiican slider.
Waxaan rajeyneynaa in hagahayagu uu kaa caawiyay in uu kugu dhex maro habka bilawga ah, laakiin si aad wax badan u barato (ama aad nuqulkaaga u qaadato) booqo ThemePunch boggiisa Kacaanka Slider Slider. Waxay muujinayaan tusaalooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan slider-kooda iyo sidoo kale isku xirka bandhigyada tooska ah halkaas oo aad ka arki karto waxa Slider Revolution uu sameyn karo.
Wax badan oo ku saabsan Kacaanka Slider
Laakiin waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno. Noogu sheeg waxa aad u malaynayso Kacaanka Slider ee faallooyinka hoose, ama xor u noqo inaad na waydiiso su'aalo kasta oo aad qabtid. Waan ku faraxsanahay inaan caawinno!
Sida loola tacaalo Bogagga Bogagga ah
Baadh ajandaha xiga SMX!